Akabata mboro nemaoko maviri ndokuipinza mubeche zvinyoro nyoro! - Masasi eHarare
DzeBonde Akabata mboro nemaoko maviri ndokuipinza mubeche zvinyoro nyoro!
Akabata mboro nemaoko maviri ndokuipinza mubeche zvinyoro nyoro!
Takatanga kubatana naBridget apa beche rake raive rakazvimbirira richiyevedza kutarisa, ndakamukama matinji iye achibata nekuita squeeze machende angu gently, ipapo mboro yangu yakanga yamira sesimbi ichiita kuvhita nekuchemerera tumisodzi tweshungu dzekuda kusvira mukadzi, ukuwo beche rake raiva radziya ratota tumvura twehavi yemboro.Ipapo ndakakotama ndokusvisvina matinji ake one at a time iye achichemerera softly with pleasure achipuruzira musoro wangu nekuunangisa kubeche rake muviri wake uchidedera.
Masasi mboro yangu ihombe uye yakachecheudzwa saka paakazoiti dzvii, mwana akakanuka kuti Ahh, ndokubva adaidza zita rangu softly achibva adzika kunonanzva muzvambarara wezimboro rangu, ndakamurega achiita hunyanzvi hwake nerurimi pamboro yangu achipinza rurimi rwake pakaburi kemboro achinzwa kuvavirira kwetumisodzi twayo tweshungu, apedza akasimudza chiso chake kuti ndimutarise mumaziso.
Ndakaona those brown eyes dzakaita seavhundutswa nemakuriro emboro yangu asi achindiudza kuti ndakuda kusvirwa manje. Mwanasikana akatanga kundibvisawo hembe dzose achitanga kupuruzira bvudzi repachipfuva changu nechoya changu nekutamba neminyatso nerurimi rwake apa achikwizira mazamu ake pachipfuva changu wanikwe ini ndongoshona semvura inovira. Akabva ashadabura makumbo ake almost 180 degrees matinji ake kukura here ikoko kuita kunge akaramwirwa.
Semwana wandaive ndada zviri so natural for a long time, ndakanga ndatononokerwa, ndakasudurudza chiuno changu kumashure zvishoma iye ndokudanazve zita rangu softly ndokuti ”take it easy babe usazondikuvadzawo hanti nekuti mboro yako iyi ihombe?” ipapo ndakagutsurira musoro ndokudzosa chiuno changu mboro yakananga pabeche rake, akabata mboro yangu nemaoko maviri ndokuipinza maari very slowly and gently, mboro yakapinda zvekumanikidzira nekunyengetedza nekuti beche rake raiva riri tight risina kudhamba seurimbo.
Ipapo ndakanzwa sendainanairwa nemasvosve muviri wose nzeve dzangu dzikarira gotsi rikati papata nekunakirwa nebeche raitsvedzerera nekuda mboro. Ndakamubata muchiuno ndichidhonzera beche kwandiri ndokumukoira deeply ndichinyudza mboro yese in deep, akachemerera nekugomera nekukura kwayo mboro. Akandibata magaro angu ose akanyudza minwe yake maari kureva kuti ainakirwa nayo mboro.
Haana kunonoka kujaira mboro yangu neniwo ndakabva ndajaira beche rake. Takakoirana deeply zviuno zvikapisa uku ndichiyamwa mazamu ake, mwana akarova chikapa chakapenga semunhu aibva kumakorekore, chiuno chake chaiita zvekugwina chichitenderera in circles beche riri pazimboro, akakoira mboro achiteedzera rhythm, ndikakoira zvekunonokera iye ononokerawo, ndikakasika iye aitambisa chiuno nemazigaro zvimwechetezvo zvekuti tose takanzwa kuwirirana kwemboro nebeche, beche rake haraisvipa mboro yangu, yairamba yakanamatira irimo mubeche rake!
Akabata mboro nemaoko maviri